Apple TV-ga cusub ee 4K wuxuu noo oggolaanayaa, markii ugu horreysay, inaan qandaraas ku qaadno Apple Care + | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV-ga cusub ee 4K wuxuu noo oggolaanayaa, markii ugu horreysay, inaan qandaraas ku qaadno Apple Care +
Markii la bilaabay jiilka lixaad ee Apple TV, Apple waxay qaadatay fursad ay ku bilawdo, markii ugu horreysay, suurtagalnimada iibso caymiska dheeriga ah ee Apple ee qalabkan, aalad ay maamusho processor-ka A12 Bionic iyo dekedda wax soo saarka ee HDMI 2.1, laba ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu waaweyn oo ay weheliso Siri Remote oo la cusbooneysiiyay.
Tani waa markii ugu horreysay ee Apple ay macaamiisheeda u soo bandhigto suurtagalnimada inay u soo iibsato caymis ballaadhan Apple TV. AppleCare + waxay bixisaa 3 sano oo caymis dheeri ah laga bilaabo taariikhda iibsashada iyo dhaawaca shilka. Markii hore, kaliya la siiyay AppleCare, oo leh laba sano oo caymis dheeri ah isla markaana aan lahayn waxyeello shil ah oo shil ah.
AppleCare + looma heli karo oo kaliya jiilka 6-aad ee cusub Apple TV +, laakiin sidoo kale tWaxaan sidoo kale kireysan karnaa haddii aan doorano jiilka 4aad ee Apple TV, ama Apple TV HD sida Apple ugu yeerto, moodel si layaableh Apple u doorbiday inuu sii wado iibinta isagoo ilaalinaya qiimaha halkii uu hoos udhigi lahaa qiimaha jiilka 5aad ee casriga ah oo leh astaamo badan.
Qiimaha ApplCare + ee Apple TV waa 29 euro, labadaba qaabka HD iyo jiilka 4aad ee 6K. Caymiskani wuxuu ku kordhinayaa damaanada qalabka 3 sano oo dheeri ah hal mar 2da sano ee sharcigu dhigayo, waxaan leenahay dhamaan isticmaaleyaasha Midowga Yurub (Mareykanka gudihiisa waa 1 sano oo kaliya).
Qiimaha Apple TV 4K ee AppleCare +
Apple TV4K oo leh 32GB keyd ah, ayaa lagu qiimeeyaa 199 euros halka nooca 64 GB wuxuu gaaraa ilaa 219 euro. Haddii aan rabno inaan qandaraas ku qaadno AppleCare +, waa inaan ku darnaa 29 euro oo dheeri ah.
Haddaan dooranno Apple TV HD (moodeel laguma taliyo haba yaraatee), waa inaan bixinaa 159 euro oo ah nooca 32 GB nooca (kaliya waa la heli karaa) marka lagu daro 29 euro haddii aan dooneyno inaan qandaraas ku qaadno AppleCare +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV-ga cusub ee 4K wuxuu noo oggolaanayaa, markii ugu horreysay, inaan qandaraas ku qaadno Apple Care +
Miyaad seegin soo bandhigiddii shalay? Halkan ayaad markale ku arki kartaa
Podcast 12 × 27: Waxaan falanqeyneynaa dhacdada Apple